चितवनका महिलाहरुले भने : बलात्कारीलाई फाँसी दे ! – उज्यालो खबर
चितवनका महिलाहरुले भने : बलात्कारीलाई फाँसी दे !
बिहिबार, माघ २९, २०७७ | ७:३५:०३ |
चितवन । बलत्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै चितवनको भरतपुर स्थित चौविसकोठीमा दिपप्रज्वलन सहित विरोध प्रदर्शन भएकोे छ । बलत्कार पछि हत्या भएको भागरथी भट्टको सम्झना र अपराधिलाई फाँसी सहितको सजायको माग गर्दै मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र चितवन र भरतपुर महानगरपालिका बाल संजालले दिप प्रजोलन गरेको हो ।
मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र चितवनका अध्यक्ष मञ्जु खाडको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद रिना गुरुङ्गको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । प्रदेश सांसद गुरुङ्गले देशमा बारम्बार महिला माथि यस्ता अमानविय घटना हुदा सरकारले केहि गर्न नसकेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गर्नुभएको थियो । सांसद गुरुङ्गले जब सम्म पीडितले न्याय पाउदैन तब सम्म सडक देखि सरकारलाई घच्घचाउने काम छोड्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्याय सडक केन्द्रीत भई दिदा जब सम्म सडक ताति दैन तब सम्म निर्मला, सम्झना, भागरथी जस्ता पीडित महिलाले न्याय पाउदैन । र, जब सम्म न्याय पाउदैन तब सम्म सडक सेलाउन हुदैन ।”
त्यसैगरी मञ्जु खाडले छोरी चेलीबेटीको बलत्कार पछि हत्या गरेर मारेकै कारण न्यान खोज्न बत्ती बाल्न पर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले िछटो बलत्कारीलाइ समाउन आग्रह गर्दै बलत्कारीलाई हदैसम्मको कानुनी कार्वाही हुनुपर्ने बताउनु भयो।
गत बुधबार विद्यालयबाट धर फर्कने क्रममा हराएकी भट्टको बिहीबार लवदेव सामुदायिक वनमा बलात्कारपटि हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । बैतडी दोगडाकेदार ७ चडेपानीकी १७ वर्षी भट्टको बलात्कारपटि घाँटी थिचेर हत्या भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी, अग्रज महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
दिपप्रज्वलन तथा विरोध प्रदर्शनमा ए सरकार एकपटक बलत्कारीलाई फाँसी दिएर त हेर फेरी अरु कोहि निर्मला र सम्झना बन्ने छैन्न । कहिले सम्म छोरी चेलि अन्धकारमा फाँसी आउछ कहिले हाम्रो देशमा । अपराधीलाई फाँसी दे भागरथीलाई न्याय दे । हामी छोरी चेलि निर्धक्क हिड्ने वातावरण बनाइदेउ सरकार । सरकार किन मौन रु निर्मलाको जस्तो त हुने होइन ? जस्ता नारा लेखिएका प्लेकाडहरु प्रदर्शन गरिएको थियो ।